Cid ii sheegi kartaa sida ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka iPhone in computer? Waxaan qaar ka mid ah farriimo muhiim ah qoraalka oo aad rabto inaad iyaga lagu wareejiyo si aan computer ay dhacdo in iyaga la tirtiro shil.
Waa wax aad loo baahan yahay si ay u gudbiyaan farriimo qoraal ah ka iPhone in computer u gurmad. Qofna ma ballan qaadi karno in isaga ama iyada iPhone waa 100% ammaan ku filan in fariimaha qoraalka ah oo dhan. Haddii aad u halgamayaan in ay eegaan si ay u soo bixi fariimaha qoraalka ah ka iPhone in computer, aad tahay meel sax ah. In socda, habka ugu fudud in wareejinta fariimaha qoraalka ah iPhone in computer.
Waxaad u Baahan si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka ka iPhone in Computer
A Windows PC la Lugood rakibay
Your iPhone iyo cable USB Wondershare TunesGo
Wondershare TunesGo - fariimaha qoraalka Transfer ka iPhone in Computer
Bedelka fariimaha qoraalka ah ka iPhone in Computer si fudud oo si deg deg ah;
Dhammaan files fariin qoraal dhoofiyo iPhone ku lifaaqan ceshan yihiin, sida sawirada,
Save fariimaha qoraalka ah iPhone sida HTML, XML, TXT files;
Dhoofinta iPhone fariimaha qoraalka ah sida qaabab file elekterikal;
Si buuxda u taageersan iPhone, sida iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 4s, iPhone 4, iyo in ka badan >>
Si buuxda u la jaan qaada ee macruufka dambeeyay 8, macruufka 7, macruufka 6 iyo macruufka 5;
Talaabooyin lagu Sida loo Copy fariimaha qoraalka ka iPhone in Computer
Tallaabada 1 Download iyo rakibi Wondershare TunesGo
Download Wondershare maxkamad version TunesGo adigoo gujinaya button Download hoose. Ku rakib iyo abuurtaan TunesGo Wondershare. Ka dib markii in, ku xidhi aad iPhone aad Windows PC via cable USB ah. Haddii ay ku xiran tahay si guul ah, waxa aad ka arki kartaa iPhone in Wondershare TunesGo uu furmo suuqa ugu weyn isla markiiba.
Tallaabada 2 dhoofinta iPhone fariimaha qoraalka in computer
Si aad u dhoofiyaan fariimaha qoraalka ah ka iPhone in computer, idinku waajibka ah inaad riix SMS tab galeeysid ah. Dooro fariimaha qoraalka doonayo in aad rabto in aad dhoofin dhinaca midig. Haddii aad rabto in aad doorato oo dhan, sax laydi ka hor Content . Markaas, guji si dhoofinta . Iyada oo ku saleysan baahidaada, dooran dhoofinta xulay SMS si computer ama dhoofinta dhan SMS si computer . Tani waxay keeni doonaa suuqa kala file browser ah. Raadi meel on your computer si loo badbaadiyo fariimaha qoraalka ah dhoofiyo. Markaas, doortaan si loo badbaadiyo fariimaha qoraalka ah ee qaab .xml ama qaab .txt ah. Ka dib markii in, barnaamijkan soo bilowday inay u dhoofiyaan fariimaha qoraalka ah.
Video Tutorial: Sida loo Download fariimaha qoraalka ka iPhone in Computer
Sidee si ay u gudbiyaan Playlists ka iPhone in Lugood
Sida loo dhoofiyo Xiriirada ka iPhone in Gmail
Sida loo soo dejinta Gmail Xiriirada inay iPhone
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka Lugood si iPhone
Sida loo iPhone kaabta si Mac Si fudud
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Chine in Lugood
> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan fariimaha qoraalka ka iPhone in Computer